Megan Maxwell: mabhuku ake akanakisa kuti avanakirwe | Zvazvino Zvinyorwa
Megan Maxwell: Her Akanaka Mabhuku
Encarni Arcoya | | Mabhuku
Megan Maxwell munyori wechiSpanish anozivikanwa nezverudo uye erotica. Kunyangwe hazvo akagadzira nhanho dzake dzekutanga mune rimwe gwaro rekunyora senge nyaya yevana. Ane mukurumbira pasi rese, anozivikanwa nebhuku rakateedzana Ndibvunze zvaunoda, muchimiro che 50 Shades yeGrey. Kuchikwereti chake ane muunganidzwa wakakura wemabhuku ekunyora kwake asi, naMegan Maxwell, mabhuku akanakisa ane rudo (kunze kwemamwe anoenda zvakanyanya kune erootic).
Kana iwe uchida ziva zvakawanda nezva Megan Maxwell, mabhuku ake akanakisa, uye hunhu hwepeni yaMegan, saka pano iwe uchakwanisa kumuziva zvakanyatsonaka.
1 Megan Maxwell ndiani
2 Megan Maxwell peni maficha
3 Megan Maxwell: Iwo Akanaka Mabhuku Mabhuku
3.1 Ndibvunze chero chaunoda
3.2 Chido chakapihwa
3.3 Mhoro unondirangarira here?
3.4 Peach tsvuku
3.5 Kugamuchirwa kuchikwata
Megan Maxwell ndiani
Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuziva nezva Megan Maxwell ndechekuti, kunyangwe iri zita "rekune dzimwe nyika", iye mukadzi wechiSpanish. Kana pamwe tinogona kuti tinoti hafu Spanish, sezvo baba vake vari mutorwa. Iyo Zita chairo raMegan Maxwell ndiMaría del Carmen Rodríguez del Álamo Lázaro uye akaberekerwa muNuremberg, Germany, muna 1965. Amai vake vanobva Toledo apo baba vake vari muAmerica. Akazvarwa uye akararama kwenguva pfupi kuGerman asati aenda kunogara naamai vake kuMadrid. Basa rake rakanga risina chekuita nekunyora, asi aive munyori muhofisi yepamutemo.
Zvisinei, Pakarwara mwanakomana wake, akafunga kumusiya kuti azvipire kumuchengeta uye, nekudaro, akatanga kunyora zvinyorwa kukwanisa kukamuranisa zvishoma kubva pahupenyu hwake. Paive ipapo pakaberekerwa zita rekunyepedzera Megan Maxwell. Panguva iyoyo, akanyoresa kosi yepamhepo yekuverenga mabhuku uye mudzidzisi, aive zvakare mupepeti, akafunga kushambadza bhuku rake rekutanga, "Ndakakuudza kudaro," muna 2009.
Megan Maxwell akatenderera maforamu zvakanyanya, uye nekuda kweizvi ane legion yakakura yevateveri, vaanodaidza kuti "Warriors nemaWarriors", kunyanya ane hukama nemumwe kubva mubhuku rake, Wish Yakagamuchirwa, kubva ku2010, yekutanga yesaga of Varwi Maxwell, kudanana uye nhoroondo manyorerwo (inoenda zvishoma kubva kune enganonyorwa yazvino uye chick yakavhenekerwa iyo yaanowanzo kunyora).
Panguva ino, Megan Maxwell anoenderera mberi nekunyora, uye nhanho dzakafanana dzakateverwa nemwanasikana wake, Sandra Miró, ndiani akaburitsa bhuku rake rekutanga, Chii chatinga kurasikirwa? nemuparidzi mumwe chete saiye, Planeta.
Megan Maxwell peni maficha
Megan Maxwell munyori anoshamwaridzana nevaverengi vake. Maitiro ake ekuudza zvinhu, aine mutauro wakajairika, aine mavara aunonzwira tsitsi uye zvinoita sekunge iwe unoziva hupenyu hwako hwese (kana kuti iwe unofungisisa nezvazvo), uye mamiriro anogona kusangana pane imwe nguva, anovaita vaverengi vane bhuku rinonakidza.
Mumashoko emunyori, anofarira kugadzira "vanhu" mavara, ane munhu waanogona kuziva uye nekuona kuti ndeechokwadi, nehunhu hwayo uye kunaka kwayo, uye nguva dzose iine magumo anofadza. Uye ichi ndicho chirevo chaMaxwell, iyo nyaya yekudanana uye eerotic inofanirwa kugara iine magumo anofadza.
Zviitiko zvake zvepabonde, zvinoenderana nerudzi rwebhuku raanonyora (kana riri rerudo kana eerotic) vanochenjerera uye vasina kusvika kune hutsinye kana zvinonyadzisira. Sarudza mutauro wakapusa uye unotsanangudza asi nguva dzose uine muganho uye uchizviisa padivi rerudo.
Zvitsauko zvaro hazvina kureba, izvo zvinoita kuti kuverenga kunakidze. Zvisinei, zvisinei neizvi, unogona kudada kuti mabhuku aunonyora anoverengwa mumaawa mashoma, kunyangwe hazvo basa rekunyora rinogona kutora mwedzi kupedzisa.
Kana vari vateveri vake, sekune vanyori vazhinji, kune avo vanofarira nzira yake yekunyora uye nevaya vasingadi. Asi izvo zvisina munhu anogona kupokana nazvo ndezvekuti, Kutenda kwaari, yerudo uye yerudo runyorwa muSpain yakatanga kubuda, ichivhura musuwo kune vamwe vanyori vazhinji.
Muchokwadi, maWarner studio ivo pachavo, pamwe neVersus, parizvino vari kushanda mukugadzirisa firimu renhau dzavo Ndibvunze zvaunoda, izvo, sezvatambotaura, zviri muchimiro che50 Shades yeGrey.
Megan Maxwell: Iwo Akanaka Mabhuku Mabhuku
Kusarudza mabhuku akanakisa aMegan Maxwell nemunyori kwakaomarara, nekuti iye ane chikwereti kwaari mazita anodarika makumi maviri akanyorwa naye. Nekudaro, isu takaita sarudzo diki yevamwe vatinofunga kuti haufanire kupotsa (uye isu zvirokwazvo tichasiya zvimwe zvakawanda). Izvi ndeizvi:
Ndibvunze chero chaunoda
Ndibvunze chero chaunoda: ...
Parizvino pane mabhuku manomwe akanyorwa mune ino saga, chinhu chekutanga chinokwezva chakanyorwa nemunyori. Ndibvunze zvauri kuda zvine hukama ne7 Shades yeGrey, uye kunyange zvichiratidzika kuti dingindira rakafanana, chokwadi ndechekuti Megan aiziva kutora nyaya yacho pasi pake.
Zvinyorwa zvebhuku rekutanga zvinotevera: Mushure mekufa kwababa vake, muzvinabhizimusi ane mukurumbira wekuGerman Eric Zimmerman anosarudza kuenda kuSpain kunotungamira nhumwa dzekambani yeMüller. Kumuzinda weMadrid anosangana naJudith, musikana ane hungwaru uye ane hushamwari waanobva adanana naye.
Judith anotera kukwezvwa kunoitwa neGerman kwaari uye anobvuma kuve chikamu chemitambo yake yepabonde, izere nekufungidzira uye erooticism. Pamwe chete naye anodzidza kuti tese tine voyeur mukati medu, uye kuti vanhu vakakamurwa kuva vanozviisa pasi uye vane simba ... Asi nguva inopfuura, hukama hwacho hunowedzera uye Eric anotanga kutya kuti chakavanzika chake chichawanikwa, chimwe chinhu chingamaka mavambo kana magumo, kuguma kwehukama.
Chido chakapihwa: Iyo ...
Iri bhuku ndere rekutanga reMaxwell Warriors, saga yakavakirwa kuScotland uye rimwe raakazozivikanwa. Iyo nyaya inotarisana nemukadzi, mukuru pahama nhatu, ane hupenyu hwave husiri nyore. Neichi chikonzero, akagadzira hunhu hwakasimba kuti asatyisidzirwe chero chinhu kana chero munhu.
Kune rimwe divi, iwe unayo Highlander Duncan McRae, anozivikanwa seFalcon, aishandiswa kune wese munhu anomuteerera. Asi naMegan zvinhu hazvisi nyore, uye izvo zvinoita kuti zvive zvinonetsa kwaari "kumudzora". Kana pamwe ndiyo imwe nzira yakatenderedza.
Mhoro unondirangarira here?
Mhoro, unoyeuka here ...
Iyi novel ndiyo imwe yeakanyanya kukosha kumunyori nekuti ine, zvirokwazvo nedzimwe shanduko, nyaya yevabereki vake. Uye ndeyekuti mairi hauzove nenyaya imwechete yerudo, asi maviri. Semamwe mabhuku, Maxwell anotamba neyekare neyezvino kuti ape mbiri mbiri dzakafanana. Mutambi mukuru, Alana, mutori wenhau uye anoenda kuNew York kunopa mushumo. Ikoko anosangana naJoel, kaputeni weFirst Marine Division yeUnited States Army. Dambudziko nderekuti anomutiza nekutya kudanana iye oenda achimutevera kuti anzwisise kuti sei asingade kutorwa nerudo.
Peach anopenga ...
Iyo ndeimwe yeanonyanyo kurudzirwa chizi yakavhenekera zvinyorwa pakati pevaverengi vaMegan Maxwell uye rimwe remabhuku ake akanakisa. Mariri muchawana vafotori vaviri "vakati pengai", vanotambura nemoto mu studio yavo, saka vanodzima moto vanofanirwa kuuya.
Mumwe wavo, Rodrigo, anova "chishuwo chechishuwo" cheumwe wavo, Ana, uye kunyangwe nekuda kweizvi asiriye wake, anosarudza kuita hushamwari "nekodzero yekubata." Dambudziko nderekuti kana nhumbu ikaonekwa pakati uye manyepo anokonzeresa kuti zvese zvisanganisike.
Kugamuchirwa kukirabhu ...
Kana iwe wakaneta nevakadzi "vane mwero" vanogara vachirota kuguma kwavo kunofadza, iwe unofanirwa kusangana nenhengo dze "Cabronas sin Fronteras" kirabhu, vakadzi vakaodzwa mwoyo nenhema uye kuora mwoyo murudo.
Silvia, Rosa naElisa havana kuve nerombo rakanaka murudo. Nekuda kwemamiriro akasiyana, vatatu vakapedzisira vaputsa hupenyu hwavanofungidzirwa kuti vakaroora uye vakatora chinzvimbo chemuchato cheusina kuroora kana kurambana. Uye kune zvakare Venice. Kuroora uye asina vana, ese hupenyu hweshamwari dzake uye kwake kwazvino kukundikana kwerudo kunoita kuti aone kuti rudo, mukuwedzera kune echinyakare, ishit
Mushure mehusiku hwekupemberera uye kudhakwa mu karaoke, kwavanoziva nyaya dzevamwe vakadzi, vane zvinhu zvinoverengeka zvakajeka:
1. Rudo nderwevasina kungwarira.
2. Kusisina kuve mambokadzi kutanga kuva murwi.
3. Mwoyo une zvombo uye musoro unotonhorera (uye kana iri mu "babamunini modhi" ... zvese zvirinani).
4. Vachagadzira kirabhu yakavanzika inonzi… Cabronas sin Fronteras.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Megan Maxwell: Her Akanaka Mabhuku
Olga Romay Pereira. Kubvunzana nemunyori weTaive Tiri Vamwari
Mabhuku akanakisa naIsabel Allende